Yan Aung: ခရီးသည်တစ်ဦး၏ ဒိုင်ယာရီ...
ဒီကဗျာလေးကို ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းသားဘ၀မှာ သင်ခဲ့ရဖူးတာကို ပြန်ပြီး စဉ်းစားမိတယ်. အဲဒီ့တုန်းက မြန်မာစာ ဆရာမက ကျောင်းသားတွေ နားလည်အောင် ရိုးရိုးလေးပဲ ရှင်းပြခဲ့ဖူးပါတယ်.
“ရည်မှန်းချက်တွေဆိုတာ ဘယ်တော့မှ အဆုံးသတ်မသွားနိုင်ဘူး. တောင်တစ်လုံးထိပ်ပေါ်ရောက်တော့ နောက်ထပ်တောင်တစ်လုံး ဆက်တက်ဖို့ ပေါ်လာသလိုပဲ ရည်မှန်းချက်တွေကလည်း တစ်ခုပြီးသွားရင် နောက်တစ်ခု ပေါ်လာတတ်တယ်. အဲဒါကို ဇွဲမလျှော့ဘဲ လူသားပီသစွာ ရှေ့ဆက်လှမ်းရမယ်.”
လူတွေဟာ ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ တောင်တွေဆီကို ရှေးရှုဦးတည်ပြီး တက်လှမ်းသွားကြသူတွေ ရှိသလို လူအများစု လိုက်တက်နေတဲ့ တောင်နောက်ကို ကောင်းနိုးနိုးနဲ့ လိုက်တက်နေကြသူတွေလည်း ရှိတတ်ကြပါတယ်.
တောင်တက်ခရီး တလျှောက်မှာ အခက်အခဲတွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပြီး နောက်ပြန်လန်ကျသွားသူတွေ ရှိတတ်သလို ရောက်နေတဲ့ လမ်းခုလတ်လေး မှာပဲ အဆင်ပြေသလိုလေး စခန်းချနေထိုင်သွားသူတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်.
တစ်ချို့က တောင်ထိပ်ကို ရောက်သွားပြီး နောက်ထပ် ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ တောင်တစ်တောင်ကို လှမ်းမြင်ရင် မဆုတ်မနစ် ရှေ့ဆက်လှမ်းကာ ထပ်တက်ကြပါတယ်. တစ်ချို့ကတော့ ခေတ္တခဏ အနားယူပြီးကာမှ နောက်တစ်ဆင့် တက်လှမ်းကြပါတယ်. တစ်ချို့ကတော့ ဒီလောက်ဆို တော်ပါပြီလေ ဆိုပြီး ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ကာ ကိုယ်ရောက်ရှိနေတဲ့ တောင်ထိပ်လေးပေါ်မှာပဲ မီးစာကုန် ဆီခမ်းသည့်တိုင် နေထိုင်သွားတတ်ကြပါတယ်.
တကယ်တော့ လူတွေဟာ ကိုယ့်အထုပ်ကိုယ်ထမ်းပြီး ဘ၀ခရီးကို လျှောက်လှမ်းနေကြတဲ့ သံသရာခရီးသည်တွေ မဟုတ်ပါလား. တောင်တက်ခရီးလမ်းတလျှောက် ကိုယ်ကူညီနိုင် သလောက် အချိန်လေးတွေ၊ ခွန်အား လေးတွေထဲကဖဲ့ပြီး ဖေးမကူညီရင်း ဘ၀ခရီးကို လူသားပီသစွာ လျှောက်လှမ်းသွား ကြသူတွေရှိတတ်သလို တောင်ခါးပန်းမှာ ကိုယ်နဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တူသူတွေကို တွန်းတိုက်ဖြတ်ချခဲ့ချင်ကြတဲ့ လူတစ်ချို့ရှိတတ်တာကိုလည်း သတိကြီးစွာ ထားရပါလိမ့်မယ်.
ကျွန်တော်တက်ခဲ့ဖူးတဲ့ တောင်တွေအကြောင်း လေးလေးနက်နက် ပြန်စဉ်းစားမိခဲ့တယ်. ကျွန်တော်နဲ့ အတူ တောင်ခြေက စပြီး ခွန်အားအပြည့်နဲ့ လှမ်းတက်ခဲ့ကြတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ချို့တွေအကြောင်းကိုလည်း ပြန်ပြောင်းတွေးတောမိတယ်. တစ်ချို့က ကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့ တောင်ပေါ်မှာရှိနေသလို၊ တစ်ချို့က တစ်ခြားတောင်ထိပ်တွေမှာ ရှိနေကြတယ်. တစ်ချို့ကတော့ တောင်ကြားထဲမှာ ဒလိမ့်ခေါက်ကွေး လဲပြို ကျဆုံးနေကြတယ်. တစ်ချို့ကတော့ တောင်သေးသေးလေးထိပ်မှာ ရပ်ရင်း သူတက်ခဲ့တဲ့ တောင်သာ အမြင့်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံးလို့ ကြွေးကြော်နေကြလေရဲ့..
ကျွန်တော်အောက်ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော်တက်ခဲ့ဖူးတဲ့ တောင်တစ်ချို့ရဲ့ ထိပ်ဖျားလေးတွေကို ဟိုမှာ သည်မှာ လှမ်းမြင်ရတယ်. ဘေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဒီတောင်ထိပ်ပေါ်မှာ ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ ရပ်နေကြတဲ့ လူတစ်ချို့ကို တွေ့ရတယ်. အထက်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်တော့ မိုးသားတိမ်မှုန်တွေကြားမှာ မားမားမတ်မတ် ရပ်နေတဲ့ တောင်အကြီးကြီးတစ်လုံးကို မြင်လိုက်ရတယ်.
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့ တောင်ထိပ်ဟာ ကျွန်တော်ရောက်ချင်ခဲ့တဲ့ တောင်ရဲ့ ထိပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို မကြာခင်မှာဘဲ ၀မ်းနည်းစွာ သိလိုက်ရတယ်. ဒီ့ထက်ပိုပြီး ရှုပ်ထွေးသွားစေတဲ့ အချက်တစ်ချက်က ကျွန်တော် ရောက်ချင်ခဲ့တဲ့ တောင်ထိပ်ကို ကျွန်တော်ဖြတ်လျှောက်ခဲ့ပြီးပြီ ဆိုတာပါပဲ.
တကယ်တော့လည်း လူတွေဆိုတာ အတ္တတွေ၊ မာနတွေ၊ မခံချင်စိတ်တွေနဲ့ ပြည့်လျှမ်းနေတတ်တော့ ဘ၀ခရီးကို လျှောက်လှမ်းရင်း အပြိုင်အဆိုင်တွေကြားထဲ လမ်းပျောက်သွားတတ်ကြတာမျိုးလည်း ရှိတတ်သေးတယ်မဟုတ်လား. အဲဒီ့လိုမျိုး လမ်းပျောက်သွားခဲ့တဲ့ ဘ၀ခရီးသွားတွေထဲက တစ်ယောက်ဟာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပြီလေ.
မကြာသေးခင်က ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်မိတယ်. အဲဒီ့ထဲမှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံကို ထွက်ခွာလာပြီး ပညာသင်ခဲ့တဲ့ တရုတ်လူမျိုး ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်အကြောင်း ပါလာခဲ့တယ်. သူက အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်မှာ ပြင်သစ်ပြည်ကို ထွက်လာခဲ့ပြီး ပညာဆက်လက်သင်ယူခဲ့တယ်. ဘွဲ့လည်းရပြီးရော အနောက်နိုင်ငံသားတွေ အများဆုံး အထင်ကြီးတတ်ကြတဲ့ Investment Banking လိုင်းထဲကို တိုးဝင်ခဲ့တယ်. မကြာခင်မှာပဲ Investment Banker တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်. သုံးနှစ်လောက် အလုပ်လုပ်ပြီး အဲဒီ့အလုပ်ကနေ သူထွက်လာခဲ့တယ်.
မကြာခင်မှာပဲ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ထူထောင်ခဲ့တယ်. Investment Banking နဲ့ ဘယ်လိုမှ မပတ်သက်တဲ့ ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေ ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းပါ. တရုတ်ပြည်က ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေကို ပြင်သစ်မှာ ဈေးကြီးကြီးနဲ့ ပြန်ယူရောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းမျိုးပေါ့. အခုတော့ သူ့လုပ်ငန်းဟာ သိပ်ကိုအောင်မြင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ. ဒါပေမယ့် အဓိကပြောချင်တာက သူပြောသွားတဲ့ စကားလေးတစ်ချို့ပါ.
အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့သူကမေးတယ်. ခင်ဗျားဘာကြောင့် ဒီလုပ်ငန်းကို ရွေးချယ်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ သူက ပြန်ဖြေတယ်.
“Investment Banking လိုင်းထဲကို ကျွန်တော်တိုးဝင်ခဲ့တာ ဒီဟာကို ကျွန်တော်ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြသချင်လို့ပါပဲ. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တကယ်လုပ်ချင်ခဲ့တာ ဒီလုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာ တဖြည်းဖြည်း ကျွန်တော်သိလာခဲ့ရတယ်.”
ဒီတော့ အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့သူက ထပ်မေးတယ်. ဘာကြောင့် Investment Banker အနေနဲ့ နှစ်အနည်းငယ်ပဲ လုပ်ပြီး ထွက်လိုက်တာလဲဆိုတော့ သူက ဒီလိုလေးပြန်ဖြေတယ်.
“အဲဒီ့အလုပ်က ကျွန်တော့်ကို အများကြီးအတွေ့အကြုံတွေ ရစေပါတယ်. ဒါပေမယ့် ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာ ကြာကြာနေလေ. လခကပိုကောင်းလာလေဖြစ်ပြီး ကျွန်တော့်အတွက် ရုန်းထွက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းထူထောင်ဖို့ ပိုခဲယဉ်းလာလေလေ ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဘာလုပ်ချင်တယ် ဆိုတာကို သိပြီးနောက်မှာ အဲဒီ့အလုပ်က ခပ်မြန်မြန်ပဲ ထွက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ”
သူ့နာမည်ကတော့ Ning Li ပါ.( ဒီနေရာမှာ သူ့အကြောင်း အပြည့်အစုံ ဖတ်လို့ရပါတယ်)
သူပြောခဲ့တဲ့ စကားလေးတွေထဲမှာ “ဒီအရာကို ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ကြောင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြသဖို့” ဆိုတဲ့ စကားလေးက ကျွန်တော့်နားထဲကို စွဲဝင်ခဲ့တယ်.
ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားမှု(Self-esteem) အတွက်ကြောင့် ဒီလိုမျိုး အများက မြင့်တယ်လို့ သတ်မှတ်တဲ့ အရာတစ်ခုကို ရအောင်လုပ်ပြခဲ့တာကို နားလည်လို့ရပါတယ်. ဒါပေမယ့် အဲဒါဟာ တစ်ဖက်ကကြည့်ရင် ကိုယ်တကယ် လုပ်ချင်ခဲ့တဲ့ အရာမဟုတ်ခဲ့တာကြောင့် သက်သက်မဲ့ အချိန်ဖြုန်းတီးမှုတစ်ခု မဖြစ်နေနိုင်ဘူးလားလို့ ကျွန်တော်တွေးကြည့်မိလာခဲ့တယ်.
ဒါပေမယ့် နောက်တစ်မျိုး စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ပြန်ရင်လည်း တစ်ချို့အရာတွေက ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ပြီးမှ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီသည်၊ မကိုက်ညီသည်ကို သိလာနိုင်တာမျိုးမို့ ကြိုးစားကြည့်ပြီးမှ သိလာရတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကို လက်ခံနားလည် နေမိပြန်တယ်.
တဆက်တည်းမှာပဲ ငွေဆိုတဲ့ အရာရဲ့ သွေးဆောင်မှုနဲ့ ကိုယ်မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုထဲမှာ ကြာလေလေ နစ်သွားနိုင်လေလေ ဆိုတဲ့ သဘောတရားကိုလည်း ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာ ကျွန်တော် နားလည်လာမိခဲ့တယ်.
တစ်စုံတစ်ခုကို လက်ခံတာနဲ့ ငြင်းပယ်တာမှာ ငြင်းပယ်ခြင်းဟာ ပိုပြီး ခွန်အားကြီးမားနေတတ်လေ့ ရှိတယ်လို့ ယေဘုယျအားဖြင့် ကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်. အထူးသဖြင့် အကျိုးအမြတ်နဲ့ ရင်းနှီးဆက်နွှယ်လာနေနိုင်တဲ့ တစ်စုံတစ်ခုမျိုးပေါ့.
အဲဒီ့လိုမျိုး ကိုယ့်ကိုယ်ကို တုပ်နှောင်မိစေတဲ့ အနှောင်အဖွဲ့တစ်ချို့ဟာ အခွင့်အလမ်းဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ လမ်းကြုံဝင်လိုက်လာတတ်သေးရဲ့.
စိတ်ထဲမှာ အမှန်တကယ် ပါခဲ့လို့မဟုတ်ဘဲ တစ်စုံတစ်ရာကို လုပ်ပြနိုင်ကြောင်း သက်သေထူခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်အရင်းအနှီးတွေ၊ အင်အားအရင်းအမြစ်တွေကို ခုနောက်ပိုင်း တော်တော်လေး နှမြောမိတယ်. ဒါပေမယ့် ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေ အတွက် ကျွန်တော် မတမ်းတလိုတော့ပါဘူးလေ. ဘယ်အရာမဆို ယူတတ်ရင် အတွေ့အကြုံတွေ၊ သင်ခန်းစာတွေဆိုတာ တင်းကြမ်းပြည့်နေတတ်တာမျိုး မဟုတ်လား.
ဆရာမ ငွေတာရီက ရည်မှန်းချက်တွေကို မြင့်အောင် ထားပြီးရင်းထားဖို့ ထိပ်ဆုံးသို့ ကဗျာလေးနဲ့ ရေးဖွဲ့နှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်.
ဒါပေမယ့် တောင်တွေတွေ့တိုင်း ကျွန်တော် မတက်ဖြစ်တော့ပါဘူး. ကျွန်တော်ရောက်ရှိခဲ့ဖူးတဲ့၊ ကျွန်တော် ပြန်လည်ရောက်ရှိချင်တဲ့ တောင်ထိပ်လေးတစ်နေရာကို ပြန်သွားဖို့ လက်ရှိအရိပ်ကနေ ကျွန်တော့်ခြေဖ၀ါးတွေ ရဲဝံ့စွာ စွန့်ခွာခဲ့ပါတယ်…
အချို့က ကဲ့ရဲ့စကားတင်း ဆိုနေနိုင်ပါတယ်. အချို့က ချီးကျူးအားကျနေနိုင်ပါတယ်.
အချို့ကတော့ ကျွန်တော်ဟာ အကျိုးစီးပွားကို မမြင်အံ့သော လူမိုက်လို့ သမုတ်နေနိုင်သလို အချို့ကတော့ ကျွန်တော်ဟာ လိုချင်တာကို ရအောင်ယူပြီး မလိုချင်တာကိုလည်း ငြင်းပယ်နိုင်စွမ်းရှိသူလို့ သတ်မှတ်နေနိုင်ပါတယ်.
စိတ္တ၀တော-ထက်သန်သော စိတ်ရှိသူအား၊ ကိံနာမ-အဘယ်မည်သော၊ ကမ္မံ-အမှုကိစ္စ ဟူသမျှသည်။ န သိဇ္ဈတိ-မပြီးစီးဘဲ ရှိနိုင်အံ့နည်း။ သိဇ္ဈတိဧ၀-မုချဧကန် အမှန် ပြီးစီးအောင်မြင်ရမည်သာတည်း။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူ့ဘယ်သူနဲ့မှ နှိုင်းယှဉ် ချိန်ထိုးနေစရာမလိုဘဲ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို ရှေ့ရှုပြီး လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ တသားတည်းကျတဲ့ ခြေလှမ်းတွေဟာ သိမ်မွေ့နူးညံ့စွာ အင်အားကြီးမားနေမြဲ...
ဧပြီ ၄၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။ ။
cho kha said...
ကျွန်တော်ရောက်ရှိခဲ့ဖူးတဲ့၊ ကျွန်တော် ပြန်လည်ရောက်ရှိချင်တဲ့ တောင်ထိပ်လေးတစ်နေရာကို ပြန်သွားဖို့ လက်ရှိအရိပ်ကနေ ကျွန်တော့်ခြေဖ၀ါးတွေ ရဲဝံ့စွာ စွန့်ခွာခဲ့
ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့ တောင်ထိပ်ဟာ ကျွန်တော်ရောက်ချင်ခဲ့တဲ့ တောင်ရဲ့ ထိပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို မကြာခင်မှာဘဲ ၀မ်းနည်းစွာ သိလိုက်ရတယ်. ဒီ့ထက်ပိုပြီး ရှုပ်ထွေးသွားစေတဲ့ အချက်တစ်ချက်က ကျွန်တော် ရောက်ချင်ခဲ့တဲ့ တောင်ထိပ်ကို ကျွန်တော်ဖြတ်လျှောက်ခဲ့ပြီးပြီ ဆိုတာပါပဲ.
ဒီရသစာတမ်းလေးကိုဖတ်ပြီး စိတ်ထဲ တွေးစရာတွေ အများကြီးရလာရတယ်ဆရာ။
ဆရာရှယ်ပေးတဲ့ တရုတ်လူငယ်လေးရဲ့အင်တာဗျူးကလည်း အတွေးတွေ အများကြီးချပေးပါရဲ့။ တကယ်ဖြစ်ချင်တကယ်လုပ်အဟုတ်ဖြစ်ရမည်တို့၊ ဖျတ်ခနဲပေါ်တာကိုဆတ်ခနဲလုပ်တို့။ စတဲ့ စကားတွေကိုလည်း ကြားယောင်လာမိတယ်။
အဲဒီအပိုဒ်ကိုလည်း ခံစားချက်နဲ့ ကိုက်ညီလို့ နှစ်သက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှ စိတ်ဝင်တစားလုပ်ကိုင်မယ့် အရာတစ်ခု(ဘာသာရပ်) မဟုတ်တာမို့ ကျွန်တော် နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကို တတိယဦးစားပေးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ ခုတော့ ကျွန်တေ်ာ ၀ါသနာပါတဲ့ ၊ လိုအပ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ကို အထူးပြုယူရင်း တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘ၀ကို တည်ဆောက်နေပါတယ။်အဓိက က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိဖို့၊ အမှန်အတိုင်းမြင်ဖို့နဲ့ အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ဆရာခင်ဗျား။
ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်၊ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်နေချင်တယ်.၊ အကျိုးစီးပွားတစ်ခုကိုပဲ ကြည့်ပြီး ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ငြင်းဖို့ခက်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်တော့ မဖြစ်ချင်ပါဘူး.၊
သိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ပဲ လျှောက်မယ်.။
>Cho Kha... မတွေ့စဖူး အတွေ့ထူးလို့ပါလား ချိုခ..း) Thanks for your comment.
>အိမ့်ချမ်းမြေ့... ကျွန်တော့်စာသားတွေနဲ့ တူနေသလိုလိုပဲနော်.း) အဲဒီ့စာသားလေးတစ်ကြောင်းရဖို့ နှစ်နာရီနီးပါးလောက် ရင်းလိုက်ရတယ် မလေးရေ...
>ဝေမိုးနိုင်... ဟုတ်တယ်ဘရားသားရေ... ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်.. Know Thyself လို့ပြောခဲ့တာ ဒါကြောင့်ပဲလေ.
>သဒ္ဓါလှိုင်း... အားပေးနေပါတယ် မသဒ္ဓါ..း) ဆက်လျှောက်...
ကျွန်မ ဖတ်သွားပါတယ် ကိုရန်အောင်။ အမြင်တူတာလေးအချို့ရယ်၊ အမြင်ကွဲလွဲတာလေးတွေအနည်းငယ်နဲ့အတူ တွေးစရာလေးကိုပါ ရခဲ့လိုက်တယ်။
>မြတ်ပန်းနွယ်... ကျေးဇူးပါ မမြတ်ပန်းနွယ်. ကိုယ်ပိုင်အမြင်လေးတွေကို ကိုယ်ပိုင်ဒိုင်ယာရီလေးထဲ ရေးချထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်မှတ်စုလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက် တချို့နေရာလေးတွေမြှ အမြင်မတူနိုင်တာကို နားလည်ပါတယ်. ကော်မန့်အတွက် ကျေးဇူး...း)
ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့ တောင်ထိပ်ဟာ ကျွန်တော်ရောက်ချင်ခဲ့တဲ့ တောင်ရဲ့ ထိပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို မကြာခင်မှာဘဲ ၀မ်းနည်းစွာ သိလိုက်ရတယ်. ဒီ့ထက်ပိုပြီး ရှုပ်ထွေးသွားစေတဲ့ အချက်တစ်ချက်က ကျွန်တော် ရောက်ချင်ခဲ့တဲ့ တောင်ထိပ်ကို ကျွန်တော်ဖြတ်လျှောက်ခဲ့ပြီးပြီ ဆိုတာပါပဲ.(ပြန်လည်စိစစ် သုံးသပ်နိုင်ခဲ့တာ ဝမ်းသာစရာပေါ့ဗျာ)
ကျွန်တော် ပြန်လည်ရောက်ရှိချင်တဲ့ တောင်ထိပ်လေးတစ်နေရာကို ပြန်သွားဖို့ လက်ရှိအရိပ်ကနေ ကျွန်တော့်ခြေဖ၀ါးတွေ ရဲဝံ့စွာ စွန့်ခွာခဲ့ပါတယ်… (မှန်ပါတယ် ခေတ္တခဏသာနေရတဲ့ လူ့ လောကမှာ စိတ်အေးချမ်းသာဖို့ လည်း လိုအပ်ပါတယ်).. ကျနော်တော့ ပြန်လည်စိစစ်နေတာ အဖြေမရနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်.. ကျနော်ရောက်ချင်တဲ့နေရာ ဘာလဲဆိုတာတောင် မသေချာခဲ့သေးပါဘူး.. တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကိုရန်အောင့်စာကို လာဖတ်မိတယ်.. ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ..
>ချစ်စံအိမ်... ကျေးဇူးညီမ...း)
>ချစ်သမီး... ဒီလိုပါပဲဗျာ. ဟိုစကားတစ်ခွန်းလိုပေါ့. ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့မရှိပါဘူး. ကိုယ့်စိတ်ထဲ ကောင်းမယ်ထင်တာကို လုပ်နေကြတာပါပဲ တဲ့...း)
ွှအဲ့ဒီကဗျာလေးကို...၁၀တန်းကျောင်းသူဘ၀တုန်းတည်းက သင်ဖူးဖတ်ဖူးတယ်...အဓိပယ်နဲ့ အနှစ်သာရကို ကောင်းကောင်းနားမလည်နိုင်းသေးခဲ့ပေမယ့် .. အဲ့ဒီကဗျာကို အမြဲ နှစ်သက်ခဲ့တယ်...ကိုကြီးး.... ဘ၀မှာ..အတိုင်းတာတစ်ခုလောက်ဖြတ်ကျော်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာ..တခါတရံအနောက်ပြန်လည့်ကြည့်မိတဲ့ အခါ..ကိုယ့်ကို နည်းနည်းအံသြမိတယ်...တချို့ သောလမ်းတွေက ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်နှစ်သက်လို့ ရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်ပေမယ့် ... လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တွေကို ပီပြင်အောင်ကြိုးစားနေရင်းနဲ့ ...ကိုယ်ဘာဖြစ်ချငိခဲ့တာလည်းဆိုတာတွေကိုမေ့သွားတယ်..တောင်းလည်းမတောင်းတတတ်မိတော့ သလို...တောင်းလည်းမတောင်းတချင်မိတော့ ဘူးးး...ပေးနေတဲ့ ဘ၀အခြေနေမှာပဲ...ကျေနပ်အောင်နေပြီးဖြေသိမ့် ရင်းးး ပီပြင်အောင်ကြိုးစားးပြီးးဆက်လျှောက်ရင်းးနဲ့ .. "စခဲ့ မိဟာပေါ့ လို့ "...
ငါ.. တောင်ဘယ်နှလုံးကို တက်ခဲ့ပြီးပြီလဲ..??
ငါ.. ရွေးချယ်ထားတဲ့ ခရီးက မှန်ကန်မှုမှ ရှိပါ့မလား..??
တွေးမိလိုက်ချိန်မှာ အနည်းငယ်သာ ကျန်တော့တဲ့ အချိန်ပါးပါးကြောင့် စိုးရွံ့တုန်လှုပ်မိသွားရတယ်။
>Unknown.. ဒီလိုပါပဲ... လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေကို ပီပြင်အောင်ကြိုးစားနေကြရတာပဲပေါ့လေး)
>မောင်နှမ...အဲဒီ့လို ပြောသွားတာကိုကလည်း တစ်မျိုးကောင်းနေတတ်ပါသေးတယ်လေ.
>မြသွေးနီ... မငိုင်ပါနဲ့ မမြသွေးနီရယ်. အဓိကက တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ တောင်အရေအတွက် များဖို့ထက် ကိုယ်တက်နေရတဲ့တောင်ဟာ တက်သင့်တဲ့ တောင်ဖြစ်မဖြစ်နဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို အဆင်ပြေအောင် ပြောင်းလဲညှိယူနိုင်ဖို့ပဲ မဟုတ်လား...
ကျွန်တော် တက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ တောင်တွေကတော့ ... တောင်ပူစာတွေ များပါတယ်လေ ...။ ဒါမှ မဟုတ် တောင်ထိပ် အထိ ရောက်အောင် မတက်ဖြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်မယ် ။ အခုတခါတော့ အမှန်တကယ် ကိုယ် ရောက်နိူင်သလောက် ရောက်အောင် တက်ရမယ့် တောင် တစ်လုံးကို တက်နေဖြစ်ပြန်ပါပြီ ... ။ တစ်ခုတည်းကို စူးနစ် လုပ်ကိုင်ဖြစ်မှ အောင်မြင်မယ် ဆိုတဲ့ အသိတစ်ခု ကိုတော့ တွေးဖြစ်သွားသလိုပါပဲ ခင်ဗျာ ....